Manni cuunfaa Oromoo New York keessatti beekkamiinsa argate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Manni cuunfaa Oromoo New York keessatti beekkamiinsa argate
Gaafa gannii isaa 15 Sawudii Arabiyaatti gala jedhee biyyaa bahe. Hin taanee qabanii Itoophiyaatti deebisan. Abdusalaam Abbaa Jabal warqii barbaada jedhee naannolee Itoophiyaa hedduu keessa mare. Saniinis hinmilkoofne, achii Yamanitti dabre.
Akka warrii isa beeku jedhutti,bara tokko osoo bidiruu yaabbatee galaana gubbaa deemuu bidiruun galaana irratti qurxamteen. Achillee nagumaan bahe, Abdulsalamii fi namoonni isa wojjiin turan. Deemuma deemee Keenyaa gahe, haguma turu turee bara 2004 milkaahee biyya bara hedduuf dharrahaa bahe,Ameerikaa gahe.
Abudulsalaam Abbaa-Jabal (Abdil) nama ganna 33, eegii Ameerikaa dhufee ganna 10.Amma New York, Manahattanitti mana cuunfaa,Oasis Jimma Juice Bar jedhamu banatee hojjachuutti jira.Hojjattoota saddeet qaba. Nama biyya alaatii dhufee jabaatee hojjannaan milkaayina gudda akka argachu kan danda’u ta’uu isaatioif, Abdulsalaam, fakkeenyaa gaariidha jedhamuun faarfama.
“Gaafa Amerikaa dhufe jabaadhee barachuu ykn ammoo jabaadhee daldaluu malee jedhee murteeffadhe,” Jechuun dubbata. Namii guddachuu fedhu akka inni jedhutti jabaatee hojjachuu fi waan hojjatu sun jaalachuu male.
Akka Abdul jedhutti nama Ameerikaa bebeekamaa fiilmii hojjachuun beekamu ka akka Saamu’eel Jaaksenii fi qabsahaan mirga Amerikaa fi kitaaba gara garaa barreessuun beekamu Dr. Cornel West,ka fiilmii akka akkaatii fi tapha TV irratti nama gammachiisuun beekamu,Ben Stillerii fi nama bebeekamaa Amerikaa hedduutti mana juusii ‘Oasis Jimmaa Juice Bar’ kanaa dhufee juusi dhuge.
Mama cuunfaa Abdullitti cuunfaa akka akkaatti gurguran; hagii tokko ta namii gabbachuu hin feene dhugu,hagii tokko ammoo ka warri sukkaarii hin jaalanne dhuguu fi cuunfaa gosa gosaattti jira. Manneen amantiillee dhaqee yoo tokko tokko tolaan ummata gargaaraa jedha, Abdul.
Ganna diqqaa keessatti maaltu akkana si milkeesse jennaan “Abbaan kiyya durii gaafa Jimmaa jiru,saatii 16 caalaa hojjatee waan hedduun ummata gargaaraa bahe,anilleen jabeenna sunti asiin na gahe,” jedha.
Karoorii isaa itti aanu waan ummata New York rakkisuutti jiraa ka akka gabbinna haga dabraa,dhukkuba sukkaaraa fi ka akka akkaa irratti documentary hojjachuu fedhaa jedha. VOA Afaan Oromoo
oasis jimmaa juice bar
Previous articleManchastar lamaan, Cheelsiifi Baayer Muniik injifatan. Arsenaal qabxii gate
Next articleUmmanni kanneen Hannaa ajjeesan seeraaf akka dhihaatan gaafachuu itti fufe